100 taona niorenana ny FET maneran-tany - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Tany amin’ny diosezin’i Toamasina no nanokafana ny fankalazana ny faha 100 taonan’ny FET tamin’ny fomba ofisialy, ny alahady 22 jiona 2014, andro fankalazana ny Sakiramenta masina. Io andro io rahateo, isan-taona, no andron’ny AFAFI (Aina sy Famonjena ny Fivavahana)-FET maneran-tany. Izay no antony nifidianan’ny Foibe any Roma azy hanokafana izao taon-jobily lehibe izao.
Fankalazana roa lehibe ihany koa no mifanindran-dalana amin’izao faha 100 taonan’ny FET izao, dia ny faha 170 taona niorenan’ny AFAFI maneran-tany sy ny faha 95 taona niorenan’ny FET teto Madagasikara.Ny teny Faneva manentana iombonana maneran-tany ho an’ izao taom-pankalazana izao dia ny tenin’i Jesoa tamin’ny mpianany manao hoe : « Mba ho ao aminareo ny fifaliako » (Joany 15, 11).
Vavaka sy famelabelarana fiomanam-panahy
Ny zoma 20 Jiona tolakandro no fahatongavan’ny mpizaika tao Toamasina, maherin’ny 500 avy amin’ny diosezy 17 nahatonga solontena, miampy ireo EKA mpianatra amin’ny Oniversite.
Ny sabotsy maraina, tao amin’ny Paroasy Notre Dame, natomboka tamin’ny Sorona masina ny fotoana. Notarihin’ny aomonie nasionaly P. Odon Andrianarisoa sj sy ny aomonien’ny diosezin’i Toamasina P. Jean Aimé Rakotoarimisy notronin’ireo aomonie avy amin’ny diosezy isan-tokony. Taorian’izay, dia nitondra ny famelabelarana sy ny fampahafantarana ny « Tantaran’ny AFAFI sy ny FET maneran-tany ary koa ny eto Madagasikara » ny aomonie nasionaly.
« Ny FET sy ny Eokaristia » kosa no novelabelarin’i P. Jean Aimé Rakotoarimisy ny tolakandro. Ny Eokaristia rahateo no fototra mampivondrona sy mampiray ny mpikambana rehetra ka dia nomena lanja sy toerana manokana izany tamin’ny fanokafana. Ny harivan’io andro io ihany dia fitsaohana masina nandraisana ny tsodranon’ny Sakiramenta masina no nifantohan’ny rehetra, tao an-tokotanin’ny kolejy Stella Maris. Vavaka narahin-kira, fihainoana ny tenin’Andriamanitra sy fotoam-pahanginana nibanjinana ny Vatana aman-dRan’i Jesoa no nameno sy nanenika ny fon’ny mpizaika. Hita taratra tokoa ny fankamamian’ny FET sy ny fanajany ary ny firaiketam-pony amin’ny fon’i Jesoa be fitiavana. Fivavahana – Tenin’Andriamanitra – Eokaristia, izany no aina mamelona sy sakafo mamonto ny fiainan’ny FET ka mahatonga azy hihaJesoa isan’andro, araka ny tarigetram-piainany. Nofaranana tamin’ny sahoby nanehoana ny fiainana maha AFAFI-FET io sabotsy io.
Ny alahadin’ny Sakiramenta Masina
Ny alahady 22 Jiona : io no tena androm-panokafana ny taom-pankalazana. Sorona Masina manetriketrika nankalazana ny Vatana aman-dRan’i Kristy no nanamarihana izany tao amin’ny paroasy Notre Dame de Lourdes. Ny arsevekan’ny Toamasina, Mgr Désiré TSARAHAZANA, no nitarika izany notronin’ireo pretra aomonie avy amin’ny diosezy isan-tokony sy ireo pretra avy ao an-toerana. Ankoatra ireo mpizaika dia kristianina an’arivony avy ao Toamasina no tonga niombom-bavaka tamin’izany. Anisany ny filoham-pirenena mivady sy ireo mpitondra fanjakana niara-dia taminy.
Nanafatrafatra ny maha zava-dehibe ny fiorenan’ny Fikambanana Masina ao anivon’ny Fiangonana ny arseveka tamin’ny toriteniny. Nomeny lanja manokana tamin’izany ny anjara toeran’ny FET sy ny endri-panabeazana ao, noho izy mifototra sy miorina indrindra amin’ny Eokaristia. Noantitrateriny ny fampiraisana ny finoana amin’ny fiainana andavanandro mba hisy akony any amin’ny fiainam-pianakavina sy ny fiainam-piarahamonina.
Novakian’ny pretra aomonie nasionaly tamin’io fotoana io ny Hafatra avy any Roma ho an’izao fankalazana izao. Isan’ny nisongadina ny hoe : « Irinay mba hanampy antsika hiaina ny hafaliana amin’ny maha naman’i Jesoa antsika izao fankalazana izao. Mahatsapa isika fa asainy hanakaiky kokoa ny fony ary hirotsaka bebe kokoa amin’ny asa ataontsika eo anivon’izao tontolo izao”.
Amin’ny maha alahady fankalazana ny Sakiramenta Masina iny andro iny dia ny vavaka mandeha namakivaky ny tanànan’i Toamasina no namaranana ny fotoana izay naharitra ora roa mahery. « Dia mivavaka » nanehoana ny finoana ankarihary an’i Jesoa ao amin’ny Sakiramenta Masina, ka nitsofan-drano ny vahoaka sy ny tanàna izay nolalovana. Naneho fanajana tanteraka ny Sakiramenta Masina tamin’ny lalana izay nolalovany ny mponin’i Toamasina.
Fiaraha-misakafo no nentina namarana ny fotoana rehetra, nanehoana hatrany ny maha Fivondronana iray atambatry ny Eokaristia. Haravoana sy hafaliana no nameno ny fon’ny mpizaika nandritra ny fotoana manontolo. Toa hita taratra avy hatrany fa efa tafita sahady ilay teny Faneva hoe : « Mba ho ao aminareo ny fifaliako ».
Ny AFAFI-FET maneran-tany sy eto Madagasikara
I. Ny Aina sy Famonjena ny Fivavahana eran-tany (Feno 170 taona)
Ny AFaFi no fototra nipoiran’ny Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora. Tamin’ny 3 Desambra 1844 no niorina tao Vals (Frantsa) ny AFAFI. RP. Xavier Gautrelet sj no nanorina azy, ary P. Henri RAMIERE sj kosa no nanohy azy taoriana kely.Ny tanjona dia Fanitarana ny Fanjakan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fanoloran-tena isan’andro amin’ny Fo Masin’i Jesoa ao amin’ny Eokaristia. Fanabeazana tao anatiny : nivavaka sy nanao komonio ary nanao asa fandavan-tena isan’andro mba hiverenan’ny fandriam-pahalemana.
I Mompera Jacques Berthieu dia voasarika sy vonton’ny fampianaran’i P. Ramière momba ny aim-panahin’ny Aina sy Famonjena ny Fivavahana, ka niditra ho Zezoita sy lasa misionera taty Madagasikara ary dia tonga Olomasina ankehitriny.
Tany Toulose Frantsa no Foibe voalohan’ny AFAFi eran-tany, taty aoriana kosa vao nafindra tany Roma ary mandraka ankehitriny.
Ny 27 Marsa 1968 no nankatoavan’ny Papa Ray Masina Paoly VI ny Sata vaovaon’ny AFAFI iombonana eran-tany ary natolotra ny Lehiben’ny Fikambanan’i Jesoa, P. Pedro Arrupe sj.Ny Fikambanan’i Jesoa rahateo no nanankinan’ny Papa ny fiandraiketana sy fampielezana ny AFAFI maneran-tany. Ankehitriny dia mahenika firenena maherin’ny 80 ny AFAFI.
II. Ny AFAFI tonga teto Madagasikara
Ny taona 1864 no tonga teto Madagasikara niaraka tamin’ireo misionera Zezoita voalohany teto anivon-tany ny AFAFI. Tao Andohalo no niorenany voalohany. Nampiasain’ny Misionera ny AFAFI hatrany am-boalohany hitoriana ny Vaovao Mahafaly satria hitany fa tsotra kanefa tena mahomby amin’ny fampielezana ny Finoana.
Ny vita Batemy rehetra no niaina ny fiainam-panahin’ny AFAFI, hany ka nitombo haingana ny isan’ny kristianina Katolika noho ny aim-panahin’ny AFAFI.
Isaky ny Paroasy lehibe teto Antananarivo dia nahitana ireo Fikambanana Masina nivondrona tao anatiny.
III. Ny FET eran-tany : 100 taona
Sampana nipoitra avy tao amin’ny AFAFI ny FET. Tany am-piandohana dia Kroazady Eokaristika no anarana niantsoana ny FET, fony mbola ireo ankizy madinika ihany no tao.
Ny taona 1910 : ny Papa Pio X dia nanome baiko sy namporisika ny ankizy vory saina hanao komonio, noho ny fiainam-pinoan’ireo ankizy tao anatin’ny Tafikakelin’ny Aina ny Fivavahana izay nitondra azy nankany amin’ny fanorenana ny Kroazady Eokaristika.
- Jolay 1914 : ny Kongresy Eokaristika Iraisam-pirenena tany Lourdes no nanorina ny Kroazady Eokaristika; saingy tany Bordeaux (Frantsa), tao amin’ny sekolin-jazavavy atao hoe Cours Saint-Seurin kosa no niorina ny kroaze voalohany ny taona 1915.
- 1917 : nankinin’ny Fiangonana tamin’ny Fikambanan’i Jesoa ny fitantanana ny Kroazady Eokaristika
- 1939 : nohamafisin’ny Papa Pio XI tamin’ny Jeneralin’ny Fikambanan’i Jesoa, P. Ledochowski sj, fa ny Kroazady Eokaristika no Fikambanana lohalaharana avy tamin’ny Aina sy Famonjena ny Fivavahana.
- Sabotsy Masina 1960 : tao Rôma, nandritra ny fankalazana ny faha 50 taonan’ny baikon’ny Papa Pio X momba ny kômonion’ny ankizy, nanoloana ireo kroazady Eokaristika 3 522 nanao Fivahinianana masina, no nanovan’ny Papa Jean 23 ny anarana ho Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora. Nanjary nizara sampana araka ny sokajin-taona misy ny ankizy sy ny tanora ny FET mba hanamora ny fanabeazana. Ankehitriny dia Firenena maherin’ny 50 no misy FET eran-tany.
Manana ny Ray am-panahy iombonana maneran-tany ny AFAFI-FET, dia i P. Fréderic FORNOS sj, izay vao nandray izany andraikitra izany tamin’ny volana Mey 2014 lasa teo. Ny Satan’ny Aina sy Famonjena ny Fivavahana no mifehy ny FET
IV. Ny FET eto Madagasikara : 95 taona
Ny 30 Novambra 1919, tao amin’ny Paroasy Faravohitra Antananarivo, no niorina ny Kroazady Eokaristika teto Madagasikara. RP Joseph de Villèle sj no nanorina azy.Nisy koa tao Ambatolampy Atsimo sy Arivonimamo.
Tamin’ny 1926 vao tena niroborobo ny tao Faravohitra. Toraka izany koa ny tao Ambatonilita, Andohalo ary Mahamasina. Ny Kardinaly Jérôme RAKOTOMALALA dia anisan’ireo Kroaze voalohany tao amin’ny sekolin-dry Frera tao Andohalo. Haingam-pitombo fatratra ny giropin’ny kroaze ka tsy ela dia nisandrahaka nanerana ny Nosy.
Ny taona 1960, dia efa nitondra ny anarana hoe FET ny Kroazady Eokaristika teto Madagasikara, fa ny Sampana zandriny kosa dia mbola nitondra ny anarana hoe Kroaze tamin’izay. Ny taona 1975 vao nandray ny anarana hoe Irak’i Kristy ny kroaze izay sampana zandriny indrindra sy ireo zokiny Vavolombelon’i Kristy. Ny Ekipa Kristianina Ankehitriny kosa dia Taona 1959 no niorenany.
- Ny Diosezy 21 eto Madagasikara dia ahitana FET avokoa.
Fanta-daza eran-tany ny FET Madagasikara amin’ny firoboroboany sy amin’ny maha taninketsan’ny Fiantsoan’Andriamanitra azy. Maro amin’ ireo Eveka sy Pretra ary Relijiozy no nandray fanabeazana taminy ; fa mbola marobe koa ireo lahika mandray andraikitra tsara sitrapo any anivon’ny fiarahamonina sy ny Fiangonana any no nahita soa tamin’ny fanabeazana FET. Ankehitriny dia maherin’ ny 200 000 ny isan’ny mpikambana manerana ny Nosy.